Ciidanka Nabad sugidda Sama-reeb oo gacanta ku dhigay dhagar-qabe Al-shaab ah | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Ciidanka Nabad sugidda Sama-reeb oo gacanta ku dhigay dhagar-qabe Al-shaab ah
Ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ayaa xalay ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan dhagar qabe ka tirsan maleeshiyaadka Al-shabaab oo waxyaabaha qarxa soo galiyey gudaha magaalada Dhuusamareeb oo fadhigoodu yahay maamulka Galmudug.
Qaar ka mid ah dadka degmadaasi oo ku sufnaa goob maqaaxi ah ayaa gacan ka geystay qabashada eedeysanahaasi,ka dib markii ciidamada nabab-sugidda ay ku wargaliyeen ninkaasi oo walxaha qarxa la soo galay goobtaasi.
Ciimada amaanka magaalada ayaa waxa ay wadaan baaritaanno amniga lagu xaqiijinayo dhagarqabihii falkan lagu soo qabtay ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada nabad sugida iyagoo bulshada uga mahad celinayaa sida ay falkaasi uga hortageen ciidamadana u soo wargaliyeen.
waxaa dhamaanba saaka la adkeeyey sugida amniga magaalada waxaana socanaya baaritaan dheeri ah saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxa ay xuseen in wixii ka soo baxa baaritaanadaasi ay dib warbaahinta kala wadaagi doonaan balse hada ay xaqiijinayaan in xalay la soo qabtay dhagarbaha doonayey inuu shacabka dhibaateeyo.
Next articleRa”iisul wasaaraha dalka oo amaanay mashaariicda horumarineed ee hay”adda Qatar Charity ay ka fulinayso dalka+sawirro